“Madaxweyne Obama Waxaa La Sheegaa In Uu Aqris Badanyahay”. W/Q Abdirahman Abdishakur Warsame | Caroog News
“Madaxweyne Obama Waxaa La Sheegaa In Uu Aqris Badanyahay”. W/Q Abdirahman Abdishakur Warsame
May 9, 2019 - Written by admin
Madaxweyne Obama waxaa la sheegaa in uu aqris badanyahay. Mid ka mid ah buugga uu ugu jeclaa ayuu ku sheegay in uu yahay (Team of Rivals), (Tiimkii loolameyey). Team of Rivals waa buug laga qoray mid ka mid ah madaxweynayaashii ugu magaca weynaa Maraykanka, Abraham Lincoln, kaasoo uu Tolstoy ku tilmaamay “ Nin culus oo hooskiisu qariyey geesiyadii Qaran Maraykanka”.
Buugga oo helay abaalmarin caalami ah, ayaa waxaa sheekadiisa sal u ah sida uu Abraham Lincoln golihiisii wasiirada ugu maareeyey rag isaga diiddan iyaguna is diiddan. William Seward, Salmon Chase, Edward Bates iyo Simon Cameron waxay ahaayeen afar nin oo Lincoln kula loolamay qofkii Xisbiga Jamhuuriga musharrax u noqon lahaa doorashadii 1860-kii ee madaxtinimada dalka Maraykanka.
Raggan oo ka waaya aragsanaa, ka aqoon badnaa kana weynaa Lincoln ayaa isku arkayey in ay isaga xilka ka mudnaayeen. Marka laga reeebo Cameron, sedaxda nin oo kale ayaa rabay in haddii midkood waayo, kan kale uu helo, laakiin midkoodna uma dhigan, maankiisana ma gelin in Lincoln uu magacaabista Xisbiga helayo.
Lincoln markii uu doorashada ku guulaystay ayuu afartii nin xilalkii ugu muhiimsanaa Golahiisa wasiirada u magacaabay. Seward wuxuu u magacaabay Wasiirka Arrimaha Dibadda, Chase wuxuu ka dhigay Wasiirka Maaliyadda, Cameron wuxuu u dhiibay Gaashaandhigga, halka uu Bates u magacaabay Wasiirka caddaaladda (Attorney General)
Joseph Medill, tafatiraha wargayska The Chicago Tribune ee xiligaas, kana mid ahaa dadkii sida weyn u taageersanaa Lincoln ayaa waydiiyey sababta uu rag ay is hayeen xilalkaa muhiimka ah ugu magacaabay, isagoo rag daacad u ah heli kara, Lincoln wuxuu ku jawaabay:-
“Waxaan u baahanahay ragga ugu miisaanka culus ee ugu kartida badan ee xisbiga in ay Golaha wasiirada ku jiraan, maadaama ay karti iyo saamayn wayn leeyihiin, xaq uma lihi in aan dalka ka gaajaysiiyo kartidooda iyo wax ku ool-nimadooda.
Dhinaca kale, Lincoln wuxuu la kowsaday dagaalkii sokeeye ee Maraykanka ee Waqooyi iyo Koonfur loo diriray, kaasoo ay ku dhowaad 800 oo kun oo ruux ay ku dhinteen. Maareynta dagaalka sokeeye, waxaan Lincoln uga dhib yarayn maaraynta kooxda is diiddan ee Golihiisa Wasiirada. Waxaa la yiraahdaa laba dagaal sokeeye ayuu ku jiray.
Buugga ayaa si faahfaahsan uga hadlaya sida ay raggaani isugu taageen, dayeenna in ay u wiiqaan awoodda Lincoln. Xitaa dhowr jeer ayey is casilaad u soo gudbiyeen. Laakiin ugu danabyntii raggii u arkayey in Lincoln ay xilka ka mudnaayeen, hoos u eegayey waaya aragnimadiisa siyaasadeed, waxay ugu danbayntii qireen kartida hoggaan ee Lincoln, iyagoo noqday saaxib dhow oo daacad u ah.
Obama ayaa la sheegay in uusan buugga jeclayn oo keli ah, laakiin uu ka tala qaatay.
Wuxuu madaxweyne Ku-xiggeen u doortay Joe Biden oo ay xurguf siyaasadeed ka dhexeysey, wuxuu Wasiirka Arrimaha Dibadda ka dhigay Hilary Clinton oo ay si lafa jebis ah ugu soo loolameen magacaabista tartanka madaxweynaha ee xisbiga Dimoqoraadiga ah. Robert Gates oo Xisbiga Jamhuuriga ka tirsan ayuu Wasiiirka Difaaca ka dhigtay. Intaa kuma ekaanin ee Inta badan tiimkiisa arrimaha dibadda iyo arrimaha amniga qaranka ayuu u magacaabay xubno isaga ka aragti duwan, si uu u helo aragti mii’saaman. Go’aanka Lincoln iyo Obama kalsooni ayaa sal u ah.
Waaxaa lagu doodi karaa inta badan hoggaannadii Soomaaliya soo maray in ay u badnaayeen kuwo jecel waxa loo yaqaan aagga sahlan (comfort zone) oo ah dad aad taqaan, daacad kuu ah, hadalna kugu soo celinaynin. Waxaa marag ma doonta ah in taas meel lagu gaari waayey.
In fal isku mid ah lagu celceliyo, natiijo cusubna la fisho, Aineshtain waali ayuu ku sheegay. Waxaa haddaba laga maarmaan ah dadka hoggaanka dalka damaca kaga jiro in ay isku diyaariyaan wadada Lincoln iyo Obama, intaa ka horna soo aqriyaan buugga Team of Rivals.
Ma dhib yara in aad xulato dad kaa aragti duwan, ku dhac leh, maya ku oran kara, laakiin karti, saameyn iyo waaye-aragnimo wax lagu xusho dalka ayey dan ugu jirtaa, waase laga yaabaa in ay ku dhibto, waxaana hubaal ah in wax kasta oo qaali ah ay qiimo ku kacayaan.
Copyright &copy 2019 Caroog News ®All rights reserved.